वर्ल्डलिङ्कमा राखियो पब्जीको सर्भर, कस्तो होला अबको ‘गेम-प्ले’ ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
वर्ल्डलिङ्कमा राखियो पब्जीको सर्भर, कस्तो होला अबको ‘गेम-प्ले’ ?
काठमाडौं । नेपालमा लोकप्रिय भिडिओ गेम पब्जीको सर्भर परिक्षण सुरु भएको छ । नेपालमा पब्जी प्रयोगकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ खपत बढेसँगै टेन्सेन्टले त्यसको सर्भर नेपाल पठाएको हो ।